Manomboka androany… : mahaliana, manoka-baravarana hiampitana ny RFC | NewsMada
Manomboka androany… : mahaliana, manoka-baravarana hiampitana ny RFC
Misokatra maimaimpoana, manomboka androany, ho an’ny mpankafy sarimihetsika ny « Rencontres du film court » (RFC) andiany faha-11. Tsapa fa marobe ny tanora liana amin’ity karazan-javakanto ity. Manokatra lalana ho azy ireo ity « festival » ity mba hahita fahombiazana, hatrany ivelany any.
Hetsika enti-manome lanja sy mampahafantatra ireo horonantsary fohy, vokatry ny talentan’ny tanora malagasy misantatra ity tontolo ity, ny RFC. Mihatsara, isan-taona, ny lentan’ny fahaizan’izy ireo araka ny nambaran’ny mpikarakara. Na izany aza, ilaina hatrany ny fanamafisana ny fahaiza-manao, toy ny lafiny teknika izay anisan’ny iankinan’ny maha kanto ilay « film ». Ny lafiny teknika, hasongadina kokoa amin’ity andiany ity.
Tena miaina sy mahaliana ny tanora ny sarimihetsika. Porofon’izany, maherin’ny 50 ny horonantsary fohy voarain’ny mpikarakara ny RFC mba hifaninana araka ny nambaran’i Laza, talen’ny « festival ».
Ao anatin’ny fandaharam-potoana koa ny atrikasa sy fiofanana, iarahana amin’ny teratany vahiny matihanina. Amin’ity andiany faha-11 ity, mihoatra ny 200 ireo hiatrika izany. Midika io fa zava-dehibe ho an’ny tanora tokoa izany fiofanana izany ; tsy misy rahateo, ny sekoly momba ny « cinéma » eto amintsika.
Amin’ity andiany ity, hiofana any amin’ny Art on the Run film school any Berlin ny mpandresy amin’ny sokajy « sarimihetsika fiction ». Hovahinin’ny Interfilm, mbola any Berlin, ihany koa izy raha toa ka handray anjara amin’ny « Festival Off-courts » any Trouville izay mahazo ny Lokan’ny mpijery.
Mitohy ny fisokafana amin’i Afrika
17 ny horonantsary fohy hifaninana mandritra ity RFC faha-11 ity. Mizara amin’ny sokajy telo : « animation », « fiction » ary fanadihadiana izy ireo. Tamin’ny taon-dasa, nisokatra ho an’ny mpanatontosa aty amin’ny ranomasimbe Indiana sy Afrika ny sokajy « animation ». Manomboka amin’ity kosa, hiitatra amin’ny sokajy fanadihadiana izany ary efa an-dalana sahady ny hampivelarana ny fifaninanana amin’ireo faritra ireo amin’ny sokajy rehetra amin’ny andiany faha-12. Marihina fa hatao ny alarobia sy alakamisy izao ny fandefasana ireo horonantsary 17.